Maalin jooga sanadka cusub ee barakacayaasha – ዜና ከምንጩ
Dalkan itoobiya munaasabadaha sanadlaha ah ee loo dabaaldago waxaa ka mid ah sagootinta sanadkii hore islamarkaana sanadka cusub lagu soo dhawaynayo barwaaqo,dhir cagaaran oo lagu ildoogsado iyo carriga oo nabad ah.
Munaasabada sanadka cusub waa sagootinta sanadkii duuga ahaa laguna soodhawaynayo sanadka cusub,waa sanadka nolasha cusub la bilaabayo,qorsho iyo rajo wanaagsan aan isku rajaynayno,waxyaabihii laga gaabiyay laga shaqeeyo wixii khaldamayna la saxo oo la horumaro,kalgacayl,ixtiraam iyo wada jir sanad ay ku wada dhanyihiin,oo sanadka cusub uu yahay buugga cusub ee nolasha. dhammaan muwaadiniinta dalkan itoobiya oodhan waa mid ay ka midaysanyihiin.
Dalkan itoobiya ayada oo aanan dhaqankan cidna maysan ka soo qaadanin,waa munaasabad sanadla ah oo jiilba jiilka dambe uu ka dhaxlayay,waaana nidaam muwadiniinta dalkan itoobiya gooni u ah qaabka loo xuso sanadka cusub.
Sanadka cusub qaabab kala duwan ayay dadku ugu kulmaan,muwadiniintuna biyaha bisha baagume ayay dhamaan,cid walbana inta awoodiisa ah,ayuu xoolaha kala duwan qalaa,sida dibi,one,ido,digaag amaba hilib intuu soo Iibsado oo si wanaagsan loo kariyo sharaab iyo cabitaana la diyaariyo ayaa dariska iyo qaraabada la iskugu yeeraa wax la wada cunaa munaasabada sanadka cusubna sidaasaa lagu xusaa.
Si kastaba ha ahaatee dalkeena degaanka tigreega xaaladaha iyo dagaalada ka taagan awgeed,sanadka cusub bulshada sidii ay horey u xusi jireen inaysan u xusin ayay ku qasbanaadeen.muwadiniinta dalkan itoobiya ee ku nool waqooyiga wallo ee deegaanka amxaarada sanadka 2014ka ‘’halkii aan dhamaanteen si wada jir ah u xusi lahayn inaan barakacno sidoo kale’’meeshii aan ka farxi lahayn inaan murugo sanadka cusub ku soo dhawayno ayay noqotay walaac inuu ka muuqdo ayaynu maqalnay hadaa nahay bahda addis maaladaa.
In ka badan 300 oo kun oo muwadiniin itoobiyaan ah inay goobahoodi ka soo barakaceen oo hada magaalada dase iyo kombolcha ay ku suganyihiin ayuu marar badan wargayska addis maalada soo tabiyay.
Dadkan soo barakacay 110 kun oo muwadiniin ah waxay ku suganyihiin 16 xero qoxooti oo laga diyaariyay magaalooyinka dase iyo kombolcha ee deegaanka amxaarada,in ka badan 3 kun oo qooys ayaa ku sugan caasimada dalka ee magaalada addis ababa. Inta soo hartayna magaalada dase iyo kombolcha inay guyra ka kiraysteen oo ay halkaas daganyihiin ayay sheegeen xubnaha guddiga gargarka bini’aadantinimada ee aagaasi.
“anaga oo guryaheena u xiisaysan ayaan munaasabadan sanadka cusub barakac iyo murugo ku soo dhawaynaynaa’’ ayay bara kacayaasha dhaheen cida sababta dhibkan ka dambaysay ayay sheegeen in ay yihiin kooxdan liiska argagaxisada lagu daray ee TPLF weerarada ay soo qaadayaan.
Wargayska addis maaladaa oo munaasabadan sanadka cusub ka duulaysa ayaa waxay kulan la yeelatay barakacyaasha ku sugan caasimada dalka ee magaalada addis ababa,magaalooyinka waqooyiga dalka ee dase iyo kombolcha.
Efrem kabada ayaa shaqsigan lagu magacaabaa.wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray caasimada gobolka waqooyiga wallo ee magaalada waldiya gaar ahaan goobta loo yaqaano adaago.asaga oo wiil yar ah maadaama uu aabihiis geeriyooday waxaa fuulay culayska masuuliyada qooyska,asaga oo wax baranaya ayuu dhanka kalena shaqayn jiray si noolasha qooyska uu u maareeyo.wuxuuna ku hawlana shaqada farsamada gacanta ee hagaajinta taleefanada xumaaday samayntooda iyo dayactirkooda.
Efrem masuuliyadii reerka ee aabihiis uu ka baxay si uu uga soo baxo maalin walba qorsho iyo jadwal ayuu nolashiisa ku hagi jiray.
Hooyadiis marka uu aabihiis dhintay maadaama ay murugaysnayd,si aysan u calool xumaanin oo farxadeeda uu u sooceliyo buur walba iyo dhagax walba oo ka horyimaada awood ayuu kaga baxaa. Efrem habeenkii wax akhris iyo wax barasho maalinkiina samaynta taleefanada ayuu wakhtigiisa galiyaa,xili roobaadka marka la gaadhana dibidiisa intuu ka xaysto ayuu beerta ka shaqeeyaa. Waxaaso dhib iyo caqabad intuu soo mari qarashaadka yar ee uu helayo munaasabadaha waawayn ee ciidaha reerkiisa xoolana wuu u qalaa dhar cusubna intuu ugu labiso ayay si wada jir ah u dabaal dagaa,waana ficilka uu naftiisa ku xasiliyo kuna farxo.
Efrem asaga oo xiligii fasaxiisa huraya ayuu aqoontiisa farsamada samaynta mobaaylada u kordhiyo wuxuu yara gaadhay magaalada kombolcha.maadaama xaalada xasilooni la’aanta siyaasadeed ee dalka ka taagan ay wiilkan walwal galin jirtay habeen iyo maalin reerkiisa ayuu oo wici jiray si uu u xaqiijiyo aminigooda.
Xiligan la joogo wax walba way isbadaleen.kooxda TPLF ee lagu daray liiska argagaxisada maadaama ay gacanta ku dhigeen magaalada waldiya wadooyinkii ay xirmeen Khadka isgaarsiintana uusan jirin xaalada amniga ee qooyskiisa kama war hayo. Wicitaanka taleefanka ee joogtada ah muusan joojinin.’’taleefanka lawacay lama heli karo’’ cod aan ahayn mamaqlo karo.
Efrem lacagtii yarayd ee uu watay kirada guriga,rashinkii uu cuni lahaa iyo waxbarashadiisa ayay ku filnaan wayday oo qarashkii ayaaba ka dhamaaday. Arinkaasina waxay ku qasabtay xerada barakacayaasha loogu diyaariyay magaalada kombolcha inuu harsado.
Hada dadkii soo barakacay inta uu ku biiray mudo ayay noqotay,oo caawimaada deegaanka iyo ururada samafalka waxa ay u soo tuurayaan ayuu nolashiisa ku maareeyaa.
Efrem xiliyadan dambe in ay dabeecadiisii isbadashay ayuu ka war bixiyay.xaalada ay reerkiisa ku suganyihiin ayaa qalbigiisa jiita oo amusnaan iyo kali ahaansha ayuu badsadaa,sidu ujoogo ayuu asaga oo fikirayo hawada kabaxaa oo waamaqane jooga.
Wiillkan dhalinyarada ah inkasta oo uu goobtiisii ka soo qaxay hadana muusan doorbidin inuu gacmaha laalaabto oo uu meel iska fadhiisto. Si dhibaatooyinka looga baxo shaqa walba oo ay noqoto in la qabto oo masuuliyada qooyskiisa uu ka soobaxo xili hore ayuu fahmay oo shaqo maalimeed ayuu bilaabay.
In kasta oo uu hada shaqo bilaabay hadana marka uu dareemo in munaasabada sanadka cusub ay soo dhawdahay wuxuu xasuustaa reerkiisii oo walwal iyo murugo ayuu dareemaa. Wararka laga sheegayo baraha bulshada ee maalin walba soo cusboonaanayo waxay ku sii abuurtay walwal ah inuusan reerkiisa helin inkasta oo uu sheegay saacad walba inuusan joojin wicitaanka taleefanka reerkiisa.
Efrem kabada rajadii uu ka qabay sanadka cusub inuu la qaato qooyskiisa in kasta oo uu ka niyad jabay,codkooda in uu maqlo laakiin wicitaanka taleefanka muusan joojinin.laakiin wicitaankiisa wax uga soo kordhay oo cusub ma jiraan.’’hadana taleefanka lama heli karo’’codka oranaya ee taleefanka dhankiisa ka imanaya ayaa sii yaraynaysa rajadii uu ka qabay helida qooyskiisa.
Efrem nolashiisa sidan ayay isku badashay,Khadka isgaarsiinta in asaga oo kaliya inuu ka hiiliyay ayay la n oqotay.xaalada qooyskiisa ay ku suganyihiin,xiisahooda iyo in uu sanadka cusub qax iyo barakac ku sugnaado inay maskaxda ka dhaawacday ayuu aaminsanyahay.qoysaskeena xaaladooda si aan u ogaano xubnaha ay arintan khusayso laga bilaabo dawlada xal dagdag ah inay doonayaan ayuu wargayska addis maaladaa.
Dhanka kale shaqsi lagu magacaabo nugus ayana oo ku nool caasimada dalka ee magaalada addis ababa ayaa yiri ‘’reerkayga xaaladooda iyo Meesha ay ku suganyihiin garan mayo. Munaasabada ciidaha inaad bilaa qooys xusto aad iyo aad ayay u xuntahay.xageesa maalin joogaaga ayuu noqon karaa?hada qooyskayga xiliga aan dib ugu laaban doono oo aan kulmayno ayaan aad ugu xiisay.’’
Wargayska addis maalada ayaa arinka cilminafsiga khabiirada kalahadashay,waxayna fikradahooda usharaxeen sida soosocota.
Muzayan Jamaal uu ah khabiir dhanka cilminafsiga ayaa yiri qof iskadaa maalimaha munaasabadaha ciidaha ee maalimaha caadiga ah xitaa haduu reerkiisa ka maqanyahay xiiso ayuu la walwalaa.gaar ahaan munaasabadaha ciidaha in guryihii iyo degaanadii lagu noolaa laga barakaco “ hada gurigayga hadii aan joogi lahaa waxaas ayaan qaban lahaa’’ islahadal nocaas ah maadama uu galayo murugo ayay qofka ku keenaysaa murugadana maskaxda ayay walwal galinaysaa oo waxay ka mid tahay xanuunada maskaxda ku yimaada sababaha keena.
Dadka dagaalo awgeed marka ay guryahooda ka soo barakacaan,wadada waxaa ku so wajihi karo dhiigooda oo daata,inay kufaan oo ay dhaawacmaan,dhacdooyinka kala duwan ee dalka lagu burburinayo taasoo walaac badan ku abuuraysa.xiliyada ciidaha qof sidii uu u bartay si ka duwan oo reerkiisa uusan la joogin marka uu ku xuso,xarunta barakacayaasha iyo dhaqaalah la’aanta ay munaasabada ku xusayaan waxay keenaysaa niyad uab uusan qofka u adkaysan Karin sida uu sheegay mudane muzayin.
Khabiirka ayaa carabka ku adkeeyay “qofka dhib marka ay la soo daristo,in uu walwalo oo dhib kale uu isku sii abuuro moyane sidii uu dhibkan kaga bixi lahaa xalkeeda maraadinayo’’.wuxuuna tilmaamay waxyaabaha xalka noqon kara ee dhibka lagaga bixi karo ama loogu adkaysan karo.
Waxyaabaha jira iyo dhacdooyinka xaqiiqda ah in kasta oo ay xunyihiin,hadana xumaanta sidii looga fogaan lahaa oo wanaaga la joogtayn lahaa in labarto ayuu xalka ugu horeeya ku tilmaamay.
Taasoo ah “tallow maxaa dhacay? Sababta ay waxan udhacayaan maxay yihiin? Waan caajisanahay’’! walwalka noocaas ah walaaca ayay kordhiyaan,dhacdooyinka noocaas ah marka maskaxdeena ay dareento halkii aan iska dhiibi lahayn,waxan way dhacdaa waana laga gudbayaa oo khayr ayay wax walba udhaceen waa inaan dhahnaa.wixii dhici lahaayeen way dhacayaan.’waxaan hubaa inaysan dhacdadan mid xun noqon doonin’ hadalada noocaas ah ee wanaagsan inaan maskaxdeena kaga shaqaysiino inay muhiim tahay ayuu sharaxaya mudane muzayin.
Mida labaad ee uu xalka ku tilmaamay ayaa ah waxyaabaha lagu xalin karo caajiska, ayada oo marka hore waxa caajiska keenay marka la ogaado wixii hadii la heli karo qofka in loosooceliyo.taasi hadii ay dhici waydo in la ducaysto oo ilaahay la isku xiro waa xalka ugu wanaagsan ee aan wax kale lagu doorsan Karin.
Mudane muzayin wixii la waayay marka la oranayo,dadka barakacay ee reerahooda ciidaha la qaadan jiray waa in badalkeeda dawlada iyo bulshada intay isku tagaan si wada jir ah ay u xusaan sanadka cusub.
Ugu dambaynti dadka soo bara kacay goobaha ay ku suganyihiin, in lageeyo kooxaha ama khabiirada cilminafsiga si ay tala bixin u siiyaan dadkan ayuu yiri.
አዲስ ማለዳ Meskrem 1 2014 No 11
Total views : 6693761